Global Voices teny Malagasy » Vorondolo Iray Mandà Tsy Mety Miala Ao Anatin’ny Parlemanta Tanzaniana. Inona Daholo No Dikan’izany? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Febroary 2019 5:00 GMT 1	 · Mpanoratra Pernille Baerendtsen Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Tanzania, Fitantanam-pitondrana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika
Kianjan'i Nyerere ao Dodoma, renivohitr'i Tanzania, foiben-toeran'ny parlemanta, “Bunge”. Sary an'i Pernille Bærendtsen, fampiasàna nahazoana alàlana.
Ny 29 Janoary teo, rehefa nivory tao Dodoma voalohany tanatin'ny fandaharam-potoany 2019 ny parlemantera Tanzaniana (Bunge), nisidina tao an-trano ny vorondolo iray, nihantona teo amin'ny valin-drihana ary nanara§maso ny fivoriana avy teny ambony teny.
Nisarika ny sain'ny firenena ny zava-mitranga ary niteraka fanontaniana maro teny amin'ireo mpampiasa media sosialy sy gazety. Inona no mety ho dikan'ny fisiana vorondolo iray ao amin'ny parlemantera?
Indroa miantaona no nahitana ilay vorondolo tao anatin'ireo efitranon'ny parlemantera tao an-tanànan'i Dodoma. Mety milaza inona izany?
‘’Fambara ratsy? ’’ hoy ny The East African, gazetim-paritra mpiseho isan-kerinandro.
Lasa lavitra ny ny an'ilay Britanika bilaogera sady mpanadihady, Ben Taylor…:
Sariitatra an'i Samuel Mwamkinga (Joune), fampiasàna nahazoana alalana.
Nanamarika ny ho fahafatesan'ny demokrasia Tanzaniana tsy ho ela ve ilay vorondolo niditra tao amin'ny parlemanta?
Taty aoriana kely, nandrafitra an-tsary ny zava-nisy ilay Tanzaniana iray mpanao sary, Samuel Mwamkinga (Joune)  tamin'ny alalan'ny fanondroana filaza britanika manao hoe ny “andiam-borondolo iray” miainga amin'ny fijery Grika milaza fa hendry ny vorondolo (sary fanaingoana nahazoana alalana).
Ny vorondolo, anefa, dia raisina ho toy ny fambara fahafatesana sy loza  ao Tanzania.
Sady – nanapa-kevitra ny hijanona ao amin'ny Bunge ilay vorondolo, araka ny voalazan'ny The Citizen:
Tsy afaka ny hiala tao ilay vorondolo, voron'ny haizina… na teo aza ireo fikasàna maro nataon'ny Parlemanta handroahana azy
Zava- mahazatra loatra ao Tanzania ireo vorondolo, indrindra koa fa ny fironan'ireo Tanzaniana amin'ny finoanoam-poana. Tamin'ny taona 2010, fanadihadiana  iray no nampahatsiahy fa ny 93% amin'ireo Tanzaniana dia mino ny mosavy.
Tsy misy ara-potoana mahazatra ho an'ny parlemanta
Ho an'ity fotoam-pivoriana manokana ity, misy dikany ny maha-eo ilay vorondolo, na dia ho an'ireo tsy minomino foana aza, izay mibaribary toa vay an-kandrina ka tsy afaka ny hodiana tsy hita.
Ny tolodalàna fanovàna ny lalàna mikasika an'ireo antoko politika no fandaharam-potoanan'ny parlemantera Tanzaniana tamin'ity fotoam-pivoriana volaohany 2019 ity, izay tohin'ny adihevitra mafonja nandritra ireo volana maromaro tao anatina rivotra ara-politika tsy nitsahatra ny nangozohozo.
Tafiiditra tao anaty tantara  i Tanzania tamin'ny taona 1992 noho izy iray amin'ireo firenena voalohany ao Afrika nametraka ny rafitra antoko maro izay manome vàhana ireo antoko mpanohitra. Ny lalàna mikasika ireo antoko politika (eto miaraka amin'ireo fanitsiana novolavolaina ) dia nampidirina ihany koa tamin'ny taona 1992 ary novàna araka ny fotoana, tamin'ny taona 2009 no nanovàna azy farany.
Miaraka amin'ilay vorondolo nihantona teo ambonin'ny fivoriambe, nanaiky ny hanova ilay lalàna ireo parlemantera tanzaniana – dingana iray izay heverin'ireo mpitsikera ho toy ny fahosàna goavana mahazo ny rafitra antoko maro ao Tanzania, ary ny demokrasia ihany koa.
Fehiny, ny fanovàna ny lalàna dia manome fahefana betsaka kokoa ho an'ny mpitantsoratra voatondron'ny governemanta, tsy hoe fotsiny hanafoana ny fandraketana an'ireo antoko politika, fa koa famaizana amin'ny endrika fanagadrana raha toa ny antoko politika iray, ohatra, ka manatontosa fanabeazana ara-piarahamonina mifandraika mifandraika amin'ny fanoratana ireo hetsika hafa manana loko politika, araka ny voalazan'ny Reuters .
Maro ireo media nitanisa an'i Zitto Kabwe, filohan'ny antoko mpanohitra ACT-Wazalendo, izay efa tamin'ny volana aogositra 2017 , no nitsikera ilay volavola fanovàna ny lalàna, nahatsinjo fa mety ho voatohintohina ireo zo ara-politika. Nampitahain'i Kabwe tamin'ilay volavolan-dalàna 2016 momba ireo tolotra media izy io, izay namerina an'ireo media malalaka sy tsy miankina . Ankehitriny, sarihan'i Kabwe ny saina ho any amin'ny fifanoheran-kevitra naterak'ilay fanovàna ny lalàna momba ireo antoko politika.
“Tsy afaka hanana lalàmpanorenana iray izay manome fahalalahana hanorina fikambanana ianareo, avy eo hanome ho an'olona ny fahefana hitsipaka an'io fahalalahana hanana fikambanana io.”
Kiongozi wa chama Cha @ACTwazalendo  Ndugu @zittokabwe  akielezea mahusiano ya Demokrasia na Maendeleo kwa kutumia Takwimu za @WorldBank  #PoliticalPartiesBill  pic.twitter.com/IwNln6Wl68 
Demokrasia miala aina?
Ny fitontongan'ny demokrasia ao Tanzania eo ambany fahefan'ny filoham-pirenena Magufuli dia olana iray miverimberina any anatin'ireo media, anisan'izany ny olana malaza mikasika ny fanarabiana.
Tamin'ny faha-30 Janoary, Fatma Karume, ramatoa filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Tanganyika Law Society, dia nibitsika ny tantara an-tsary iray an'i Gado , keniàna iray mpanao sariitatra (22 Septambra 2017) nanipika ny andraikitry ny Filoham-pirenena Magufuli sy ny fahafatesan'ny demokrasia manao hoe:
Salama daholo. Mirartontolo andro finaritra. sary ao amin'ny twitter 
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, nitodik tamin'ny fanatsofohana didy jadona  ho ao anatin'ny lalàny i Tanzania, niteraka fihenan'ny toerana ho an'ireo mpanohitra ara-politika mpaneho hevitra sy ireo media tsy miankina. Amin'izao fotoana izao, milaza ireo mpitsikera fa ilay lalàna novàna mikasika ireo antoko politika dia manasarotra kokoa ny fanaovana politika mitsikera ny filoham-pirenena sy Chama Cha Mapinduzi (Ny antokon'ny revolisiona), eo amin'ny fitondrana hatramin'ny Fahaleovantena tamin'ny taona 1961.
Tena ilaina ny mpanohitra mba hisian'ny demokrasia mampahery sy mampientanentana. Hanamarina ny governemanta sy hitsipaka azy ny mpanohitra matanjaka. Raha tsy misy ny mpanohitra, toa tsy azo inoana ny hisian'ny fisoloana tena tsara ny hamaroan'ireo filan'ny olompirenena.
Tao anatinà bitsika 15 , i Rachel McLellan mpianatra iray manomana ‘doctorat’ , no nampiseho tamin'ireo mpifidy ny vokatra mety hitranga aterak'ilay lalàna vaovao ary mamaritra ny toedraharaha izay hampihitsoka ny mpanohitra :
Nanjavona avokoa ny ankamaroan'ireo fahafahanareo mandresy lahatra ny mpifidy. Inona no ataonao raha toa ianao antoko mpanohitra iray? Miverina eo amin'ny tabilao fandrafetan-tsary dia manolotra tetikady vaovao, sa tsy izany? Eny, io volavolan-dalàna io dia manome ny fahefana ho an”ireo Mpitantsoratra ny Antoko izay tena manasarotra izany 5/n
Mpinompino foana na tsia – ireo izay mitsikera ny fikisahana mankany amin'ny didy jadona ao Tanzania dia mahita fanamaivanana mampalahelo amin'ny fisian'ilay vorondolo sy ireo fikasana tsy nahomby natao handroahana azy.
Nijanona ilay vorondolo. Ny mpitondra tenin'ny Parlemanta, Job Ndugai, dia nikasa hanova ny finoana nentim-paharazana miaraka amin'ny fanazavana iray miankina amin'ny zava-misy :
“Ry mpikambana hajaina ao amin'ny Parlemanta , hatramin'ny maraina no efa hitanay tao anaty Efitrano ilay vorondolo saingy, ao anatin'ny fomban'ireo mponina ao Dodoma, tsy misy fiantraikany amin'ny olombelona ny vorondolo hita amin'ny andro antoandro . Midika izany fa tsy misy atahorantsika ny fisiany.”
Kanefa, ho an'ireo mpitsikera, ilay lalàna vaovao dia tsy misy hifandraisany amin'ny zava-misy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/28/134810/
 January 30, 2019: https://twitter.com/MwananchiNews/status/1090514205105680384?ref_src=twsrc%5Etfw
 Fambara ratsy?: https://www.theeastafrican.co.ke/magazine/Bad-omen-Owl-spotted-in-Tanzania-parliament/434746-4958530-oq0mtu/index.html
 January 30, 2019: https://twitter.com/mtega/status/1090568305776250881?ref_src=twsrc%5Etfw
 Samuel Mwamkinga (Joune): https://www.facebook.com/JOUNEsammi
 fambara fahafatesana sy loza: https://www.thecitizen.co.tz/News/Owl-enters-Tanzania-Parliament/1840340-4958144-view-asAMP-lowa40/index.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0lGfYdiws1qbgy4R95F4rfXV8BpLe-ITMtuLx7Bh5ZrT9JQ26-azNQnl8
 Tafiiditra tao anaty tantara: https://www.jstor.org/stable/4006174?seq=1#page_scan_tab_contents
 eto miaraka amin'ireo fanitsiana novolavolaina: http://parliament.go.tz/polis/uploads/bills/1542977541-BILL%20THE%20POLITICAL%20PARTIES%20(AMENDMENT)%20ACT,%202018%20.pdf
 volana aogositra 2017: https://www.thecitizen.co.tz/News/Zitto-cautions-over-new-Political-Parties-Act/1840340-4078784-mag33pz/index.html
 namerina an'ireo media malalaka sy tsy miankina: https://www.twaweza.org/go/media-service-bill-analysis-2016
 January 29, 2019: https://twitter.com/ActVijana/status/1090350601387589632?ref_src=twsrc%5Etfw
 January 30, 2019: https://twitter.com/fatma_karume/status/1090469532655853568?ref_src=twsrc%5Etfw
 sary ao amin'ny twitter: https://twitter.com/fatma_karume/status/1090469532655853568
 didy jadona: http://www.journalofdemocracy.org/article/tanzania-shrinking-space-and-opposition-protest
 Tao anatinà bitsika 15: https://twitter.com/RachaelMcLellan/status/1090333075224100865
 January 29, 2019: https://twitter.com/RachaelMcLellan/status/1090331155465949189?ref_src=twsrc%5Etfw